May 6, 2021 N88LeaveaComment on गोलभेँडाले ‘शुक्रकीटको गुण बढाउन सघाउँछ’ बीबीसी रिपाेर्ट
एजेन्सी । गोलभेँडामा पाइने लाइकपीन नामक पोषक तत्त्वले पुरुषमा शुक्रकीटको गुण बढाउने एउटा अनुसन्धानले देखाएको छ। प्रत्येक दिन गोलभेँडाको दुई चम्चा गाढा लेदो (प्युरी) सेवन गर्ने स्वस्थ पुरुषमा गुणात्मक रूपमा राम्रो शुक्रकीट बनेको पाइएको छ। सन्तान जन्माउन नसक्ने दम्पतीमध्ये आधाजसोमा पुरुषमा बाँझोपन भएको पाइन्छ। विज्ञहरूले पुरुषमा हुने बाँझोपनको समस्याबारे थप अध्ययन हुनुपर्ने औँल्याएका छन्। यूकेको […]
May 6, 2021 N88LeaveaComment on इटहरीमा नग्न अवस्थामा शव फेला
इटहरी । इटहरीमा नग्न अवस्थामा एक पुरुषको शव फेला परेको छ । बिहीबार बिहान इटहरीकाे टेङ्ग्रा खोला नजिकै नग्न अवस्थामा एक पुरुषको शव फेला परेको हाे । पुल छेउमा एक अपरिचित पुरूषको शव फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जानकारी दिएकाे छ । पुरुषको कुटपिटबाट मृत्यु भएको हुनसक्ने प्रहरीकाे प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेकाे छ । अन्दाजी […]
कोरोना उपचारमा खटेकी नर्स जब भित्री वस्त्र मात्र लगाएर पुरुष वार्डमा पुगिन्
May 6, 2021 N88LeaveaComment on कोरोना उपचारमा खटेकी नर्स जब भित्री वस्त्र मात्र लगाएर पुरुष वार्डमा पुगिन्
एजेन्सी । कोरोना भाइरस ‘कोभिड १९’ को उपचारमा खटेकी रुसकी एक नर्स भित्री पोशाकमै पुरुष वार्डमा पुगेपछि यो विषय भाइरल बनेको छ।सार्वजनिक भएको फोटोमा उनले भित्री पोशाक र पारदर्शी पीपीई लगाएकी छन्। २० वर्षकी नर्स टुला शहरको एक अस्पतालको पुरष वार्डमा खटेकी थिइन्। उक्त वार्डमा पुरुष कोरोना संक्रमितहरु उपचाररत छन्। अस्पतालमा काम गर्ने नर्सले पारदर्शी […]
यिनै हुन् ट्याक्सीमा छुटेको १३ तोला सुन फिर्ता गर्ने चालक
May 6, 2021 N88LeaveaComment on यिनै हुन् ट्याक्सीमा छुटेको १३ तोला सुन फिर्ता गर्ने चालक
काठमाडौं । सोमबार दिउँसो साढे १ बजे लक्की रिजाल लाजिम्पाटबाट थापाथली नर्भिक अस्पताल चोकसम्म यात्रा गर्दै थिइन्। गन्तव्यमा पुगेपछि उनी ट्याक्सीबाट ओर्लिइन्, तर ‘लगेज’ ट्याक्सीमै छुट्यो। रिजालले लगेज छुटाएको कुरा चालकले पनि झट्ट थाहा पाएनन्। रिजाललाई ट्याक्सीको नम्वर पनि थाहा भएन। रिजालले आफ्नो लगेज ट्याक्सीमा छुटेको भन्दै साढे ३ बजे ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा निवेदन दिइन्। […]
May 6, 2021 May 6, 2021 N88LeaveaComment on संक्रमितको नयाँ रेकर्ड–थप ९०७० जनामा संक्रमण पुष्टि
काठमाडाैं । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ९०७० जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हालसम्मकै रेकर्ड संक्रमित पुष्टि भएको हो । यसअघि बुधबार देशभर ८६५९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने ५८ जनाको मृत्यु भएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार पीसीआर विधिबाट २० हजार ३६७ र […]
निषेधाज्ञाको बेला के तपाई घरमा बसिरहँदा दिक्क हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस् समय बिताउन
May 6, 2021 N88LeaveaComment on निषेधाज्ञाको बेला के तपाई घरमा बसिरहँदा दिक्क हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस् समय बिताउन
काठमाडाैं । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएकाे काेराेना महामारीले सारा संसार अहिले आक्रान्त छ । दक्षिण यसियाली देश भारतसहित नेपाल यतिबेला तुलनात्मक रूपमा बढी चपेटामा छ । भारतमा दैनिक ४ लाख भन्दा धेरै संक्रमित थपिरहेका छन् । हरेक दिन संसार भर थपिएका संक्रमित मध्य आधा भारतकै छन् । यता नेपालमा हरेक दिन रेकर्ड ताेड संक्रमण फैलिरहेकाे छ […]
श्रीमतीले दिएको खाना खाँदा श्रीमानको मृ .. त्यु
May 6, 2021 N88LeaveaComment on श्रीमतीले दिएको खाना खाँदा श्रीमानको मृ .. त्यु
धादिङ । एक महिलाले श्रीमानलाई खानामा वी -ष राखेर दिइन् । उनको मृत्युपछि घटनावाट बच्न विदेश भागेकी थिइन् । घरमा भएको खाना जाँच गर्दा वि षादी मिसाएको थाहा भयो । अनुसन्धानका क्रममा महिला नै दो षी भएको खुल्दासम्म उनी जोर्डन पुगीसकेकी थिइन् । श्रीमानलाई खान दिएको भातमा वी-ष मिसाइएको थियो । ती महिला अहिले ४ […]
May 6, 2021 N88LeaveaComment on पूर्वमन्त्री पहाडीको कोरोनाबाट मृत्यु
राँझा । कोरोना सङ्क्रमित भई भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचाररत पूर्वमन्त्री मोतीप्रसाद पहाडीको मृत्यु भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१० निवासी ७७ वर्षीय पूर्वमन्त्री पहाडीको उपचारकै क्रममा आज बिहान १ः४० बजे मृत्यु भएको हो । उच्च रक्तचाप र मधुमेहबाट पीडित उहाँ कोरोना सङ्क्रमित भएपछि होमआइसोलेशनमा रहेकाबेला अक्सिजनको मात्रा कम भएपछि बुधबार बिहान भेरी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो […]
May 6, 2021 N88LeaveaComment on पोखरामा उपचाररत ४ जना संक्रमितको मृत्यु
काठमाडौं । कास्कीको पोखरामा उपचाररत ४ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । गण्डकी प्रदेश कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रमका प्रवक्ता डा. विनोद विन्दु शर्माका अनुसार बुधबार राति र बिहीबार बिहान गरी कुल ४ जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा पोखरा महानगरपालिकाका तीन जना र म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकाका एकजना छन् । चरक अस्पतालमा पोखरा […]
May 6, 2021 N88LeaveaComment on प्रसिद्ध गायक प्रेमध्वज प्रधानको निधन
काठमाडौं । गायक प्रेमध्वज प्रधानको निधन भएको छ । उनको बिहीबार सुन्धारास्थित ‘काठमाडौं न्यूरो एन्ड डेन्टल अस्पताल’मा निधन भएको हो । छातीमा समस्या देखिएपछि केही दिन अगाडि उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । ८४ बर्षका प्रधानको उपचारका क्रममा निधन भएको संगीतकार संघका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण शेषले जानकारी दिए । वि.सं.१९९४ साल असार कृष्णपक्षका दिन सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको […]